Shanks, CNC တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ခေါင်းဆောင်များ Taper Shanks Boring, ဌာနမှူး Shanks Boring Precision ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ, ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ Shanks ကမ်းလှမ်းရန်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များစနစ်ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ Shanks
ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ Shanks ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ Shanks, တိကျယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ Shanks ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, CNC ဌာနမှူး Shanks Boring R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
High Quality MT2-1-1 /2'' '- ဌာနမှူး Shanks Boring 18 M10 F1 ကို
ဦးခေါင်း Shanks Boring 18 - High Quality C20-F1-1-1 /2''
High Quality ISO30-1-1 /2'' - 18 M12 ကိုဘှားမွငျဌာနမှူး Shanks
ပျင်းစရာကောင်းဦးခေါင်းများအတွက် CNC အစိတ်အပိုင်းများ nbh tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD7- 7.6 / Piece/Pieces
High Quality MT2-1-1 /2'' '- ဌာနမှူး Shanks Boring 18 M10 F1 ကို ထိုသို့သောစသည်တို့ကို jig ပျင်းစရာစက်, အလျားလိုက်ပျင်းစရာစက်, ကြိတ်စက်, CNC စက်သကဲ့သို့, စက်ကိရိယာအဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် ခြေလှမ်းတွင်းစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက် Ang အတွင်းစိတ် Ang အပြင်ဘက် groove boring, အပြင်ဘက်အချင်းပျင်းစရာအတွင်းပိုင်း,...
ဦးခေါင်း Shanks Boring 18 - High Quality C20-F1-1-1 /2'' ထိုသို့သောစသည်တို့ကို jig ပျင်းစရာစက်, အလျားလိုက်ပျင်းစရာစက်, ကြိတ်စက်, CNC စက်သကဲ့သို့, စက်ကိရိယာအဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် ခြေလှမ်းတွင်းစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက် Ang အတွင်းစိတ် Ang အပြင်ဘက် groove boring, အပြင်ဘက်အချင်းပျင်းစရာအတွင်းပိုင်း, facing...
High Quality ISO30-1-1 /2'' - 18 M12 ကိုဘှားမွငျဌာနမှူး Shanks ထိုသို့သောစသည်တို့ကို jig ပျင်းစရာစက်, အလျားလိုက်ပျင်းစရာစက်, ကြိတ်စက်, CNC စက်သကဲ့သို့, စက်ကိရိယာအဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် ခြေလှမ်းတွင်းစသည်တို့ကိုဖြတ်တောက် Ang အတွင်းစိတ် Ang အပြင်ဘက် groove boring, အပြင်ဘက်အချင်းပျင်းစရာအတွင်းပိုင်း, facing...
ပျင်းစရာကောင်းဦးခေါင်းများအတွက် CNC အစိတ်အပိုင်းများ nbh tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ အဆိုပါ nbh2084 ခေါင်းကို boring NBH 2084 အတွက်အသုံးပြုသည်။ rbh ပျင်းစရာကောင်းဦးခေါင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် 0.01mm.And ကအရည်အသွေးမြင့်အလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သော er collets, နှိပ် collets,...
တရုတ်နိုင်ငံ ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ Shanks ပေးသွင်း
competetive စျေးနှုန်းများနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ခေါင်းဆောင်များ Shanks ရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။
Shanks ၏ရတာဟာအမျိုးအစားများ: R8 Shanks, MT Shanks နှင့် BT Shanks, NT Shanks ။
သင့်လျော်သောဒီ Shanks 1/2 "က DIA X ကို 18TPI နှင့် 7/8" သောယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏ဌာနမှူး၏ရတာဟာချည်က DIA 20TPI x ။
အဆိုပါ Boring ဌာနမှူး Shanks မှလွဲ. ငါတို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောဦးခေါင်း, Tool ကိုစာတိုက်နှင့် Holder, Collection, Chuck, Chuck Drilling, Mills Arbore, အင်္ကျီလက်, ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို, အလုပ်လုပ်ဇယား, etc Boring တိကျစွာအဖြစ်အချို့နဲ့အခြားစက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်များအတွက်, ကြင်နာစွာကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ သင်တို့သည်လည်းတိုက်ရိုက်နောက်ထပ်အကူအညီများရရှိရန်အီးမေးလ်, ဖက်စ်နှင့်ဖုန်းမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
CNC ဌာနမှူး Shanks Boring
ပျင်းစရာခေါင်းဆောင်များ Taper Shanks